Ilanga kunye neParadesi ye-Ski-Unyaka Round fun kunye nokuphumla - I-Airbnb
Ilanga kunye neParadesi ye-Ski-Unyaka Round fun kunye nokuphumla
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLynn
I-Condo entle kwindawo edumileyo yaseWyldwood, eCollingwood, kulo lonke ixesha ekusingwa kulo
Le condo enefenitshala epheleleyo kunye negumbi lokulala eliyi-1 kunye nedenki yabucala kunye nomfana ongenamsebenzi kunye neNdlovukazi ekhupha isofa yindawo entle yokuba iintsapho okanye izibini zonwabe, ilala abantu abayi-4 ngokukhululekileyo. Ipeyintiwe ngokutsha kunye nayo yonke ifenitshala entsha kuyo yonke inesitayile esicocekileyo, esitofotofo nesexesheni. Ibhedi enkulu kwigumbi lokulala elikhulu kunye nesofa enkulu ekuthiwa yi-memory foam eDen. Izinto ezifumanekayo ziquka ikhitshi elimiselweyo elinomatshini wokuhlamba izitya, i-smart TV, umatshini wokuhlamba nowokomisa izitya, indawo yokubasa umlilo, indawo yokutshixa engaphandle, iveranda enkulu enendawo yokubraya. Unyaka wonke ipuli ephandle enamanzi ashushu, iindawo eziyi-2 zokupaka ezabelweyo. Ukubuyela umva kwiindlela zokuhamba, indawo efanelekileyo yokutyibiliza kwikhephu, ichibi, igalufa, ukuthenga kunye neevenkile zokutyela ezintle zaseCollingwood kunye nezolonwabo. Yindawo entle onokuya kuyo ngamaxesha amane enokwenziwa kuyo yonke iminyaka.
Le ndawo ineendlela ezininzi zokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika, ukubaleka kunye nokuhamba. Masingalibali ibrewery yasekuhlaleni kunye nedistilleries. Kufuphi ne-waterfront; indawo yokutyela, ukuzonwabisa okuphilayo kunye nevenkile yekofu kunye nevenkile yokubhaka kukuhamba nje okufutshane okanye uqhube kude. Kukho indawo yokumisa i-marina kunye nezokuhamba zikawonke-wonke kufutshane. Ulwandle lwaseWasaga kunye nolunye uhambo kukuhamba okufutshane.
Siya kufumaneka nanini na ukuze sikuncede ngemibuzo okanye ngayo nantoni na efunwa yi-app ka-Airbnb, itekisi okanye ifowuni. Uya kufumana isikhokelo sedijithali kwindawo yethu kunye nommandla wendawo. Kuya kubakho i-binder ngolwazi oluninzi malunga namashishini asekuhlaleni kunye neziganeko.
Siya kufumaneka nanini na ukuze sikuncede ngemibuzo okanye ngayo nantoni na efunwa yi-app ka-Airbnb, itekisi okanye ifowuni. Uya kufumana isikhokelo sedijithali kwindawo yethu kuny…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Collingwood